သင်၏စီးပွားရေးဆိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး WordPress ပလပ်ဂင်များ
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 26, 2021 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 25, 2021 Douglas Karr
အချို့သော WordPress plugin ကိုလူကြိုက်များမှုသည်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်စားသုံးသူအခြေပြုတပ်ဆင်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကော။ WordPress စီးပွားရေးအသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများ၊ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်များသို့မဟုတ် desktop များမှတဆင့် ... နှင့်သူတို့၏လူမှုရေးနှင့်ဗွီဒီယိုမဟာဗျူဟာများကိုအပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
လူကြိုက်များသော plugins အချို့ကိုတီထွင်လိုက်သောအခါ WordPress အတွင်းရှိလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အံ့သြဖွယ်ရာအလုပ်များကိုလုပ်သည့်ပလပ်ဂင်များအားရှာဖွေခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းကိုကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်သည်။ WordPress ပလပ်အင်များသည်ကောင်းချီးတစ်ခုနှင့်ကျိန်ခြင်းနှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
WordPress သည်အရှိန်မြှင့်လာပြီး၊ plugin အဟောင်းများအားသူတို့၏ plugin repository တွင်မြင်ကွင်းမှသက်တမ်းကုန်သွားပြီး၎င်းတို့အားစာမရေးရလောက်အောင်သေချာစေရန် plugins အသစ်များကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုသည်။ Self-hosted WordPress ဖြစ်ရပ်များကသင့်အားမည်သည့် plugin ကိုမဆိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုထားသဖြင့်သင်၏အိမ်စာကိုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များပေးရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်ကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။
ထို့အပြင်များစွာသော အကောင်းဆုံး WordPress ပလပ်အင်စာရင်းများ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘလော့ဂ်ဂါနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်သူတို့၏ထူးခြားသောအားထုတ်မှုများကိုအမှန်တကယ်အာရုံမစိုက်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်စစ်မှန်တဲ့အစုံဖြစ်ပါတယ် စီးပွားရေးအတွက် WordPress plugins များ WordPress ပလပ်ဂင်များ၏ကျယ်ပြန့်သောရှုခင်းများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
Word ည့်သည်များအားဆက်သွယ်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်အတွက်အကောင်းဆုံး WordPress Plugins များ
ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ PayPal, MailChimp, AWeber နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သော third-party ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစပ်နိုင်သော configuration options အမျိုးမျိုးဖြင့်လျင်မြန်လွယ်ကူသောပုံစံတည်ဆောက်ခြင်း။ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက် add-ons နှင့် API ကိုရနိုင်သည်။
Jetpack - သင်၏ WordPress ဆိုဒ်၏စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သောအခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေမှုရသည့်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် Jetpack သည်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ ငါယုံကြည်သောသော့ချက်လက္ခဏာနှစ်ရပ်မှာလူမှုရေးခွဲဝေမှုစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်တိုးမြှင့်ခြင်းမှတဆင့်ရယူသည်။ အခြားအင်္ဂါရပ်များတစ်တန်ရှိပါတယ်သော်လည်း! အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ plugin ကို Automattic ကတီထွင်ထားတာကြောင့်အဲဒါကိုရေးသားပြီးအမြင့်ဆုံးစံနှုန်းနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။
သင်၏ WordPress အုပ်ချုပ်ရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး WordPress Plugins
သင်၏ပါဝင်မှုနှင့်၎င်းကိုရောက်ရှိရန်စွမ်းအားမြှင့်ရန်အကောင်းဆုံး WordPress ပလပ်ဂင်များ
Podcast Feed ကစားသမား Widget - ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီထွင်ခဲ့သောဝစ်ဂျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအတော်လေးရေပန်းစားသည်။ သင်၏ podcast ကိုအခြားနေရာများတွင် hosting ရှိလျှင် feed ကိုထည့်။ သင်၏ podcast ကိုဘေးဘားသို့ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ် post တစ်ခုအတွင်း shortcode ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် WordPress ၏ဇာတိ HTML အသံဖွင့်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။
WP Mail Log - မင်းအီးမေးလ်တွေကို PHP (သို့) SMTP မှတဆင့်မင်းဆိုက်ကနေပို့တာဟုတ်မဟုတ်မင်းတွေးဖူးရင် WP Mail Log ကမင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုစာပို့တာကိုခြေရာခံဖို့အရေးကြီးတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပဲ။
WP PDF - WordPress တွင်မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသော PDF ဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာထည့်သွင်းပါ။ သင်၏ကြည့်ရှုသူများအားသင်၏မူလဖိုင်များကိုကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ခြင်းမှတားဆီးပါ။
သင်၏ WordPress ဆိုက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံး WordPress Plugins
ကျိုး Link ကို Checker - Broken Link Checker သည်သင်၏ site ရှိအတွင်းပိုင်း link များနှင့်ပြင်ပ link များအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးပျက်စီးနေသော link များကိုရှာဖွေသည်။ SEO နှင့်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်သင်ကမကောင်းသောလင့်ခ်များကိုပြင်ဆင်ရန်ကူညီသည်
WordPress ကို SEO ဆိုသည်မှာ -Rank Math သည်စာမျက်နှာပေါ်မှအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ XML sitemap များ၊ ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများ၊ ပြန်ညွှန်းချက်များ၊ ၄၀၄ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောပေါ့ပါးသော SEO Plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ Pro ဗားရှင်းတွင်ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများ၊ နေရာများစွာနှင့်အခြားအရာများအတွက်မယုံနိုင်စရာအထောက်အပံ့ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာကုဒ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းစွာရေးထားသောကြောင့်သင်၏ WordPress SEO plugins များကဲ့သို့သင်၏ site ကိုနှေးကွေးမသွားစေပါ။
ကွတ်ကီးနှင့်အချက်အလက်လိုက်နာမှုအတွက်အကောင်းဆုံး WordPress plugin
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည် visitors ည့်သည်များ၏အချက်အလက်များကိုသင်မည်သို့ခြေရာခံ။ သိမ်းဆည်းသည်ကိုထိန်းချုပ်သည့်နိုင်ငံတကာ၊ ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ငါကွတ်ကီးခွင့်ပြုချက်များအတွက် Jetpack ဝစ်ဂျက်ကိုသုံးခဲ့ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဖွင့်ပြီးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများမရှိပါ။
သင်၏ WordPress ဆိုက်ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံး WordPress Plugins
VaultPress - သင်၏အချိန်၊ backup၊ အလိုအလျောက်လုံခြုံရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်သင်၏ပါဝင်မှု၊ အကြောင်းအရာ၊ ပလပ်အင်များနှင့်ဆက်တင်များကိုကာကွယ်ပါ။
WP လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း - အသုံးပြုသူ၏ပြောင်းလဲမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ပြootနာဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူစေရန်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဟက်ကာများတားဆီးရန်စောစီးစွာသံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူများကိုဖော်ထုတ်ရန်အထိရောက်ဆုံး WordPress လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းပလပ်အင်။
အပြည့်အဝထောက်ပံ့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, ပေးဆောင် plugins အချို့ရှိပါသည် Themeforest မင်းဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ဘူး မိခင်ကုမ္ပဏီ Envato သည်ပလပ်ဂင်များအားမကြာခဏမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သေချာစေရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။
Tags: Akismetအကောင်းဆုံးပလပ်ဂင်များအကောင်းဆုံး wordpress plugin များကိုစီးပွားရေး wordpress plugins များccpaCDNလိုက်နာမှု plugin ကိုcookie ကိုမူဝါဒကgdprgoogle site kit ပါpodcast ကစားသမားမင်္ဂလာပါအမြန်မူကြမ်း access ကိုအဆင့်သင်္ချာပြန်ပို့သည်တိတ်တခိုးဝစ်ဂျက်ပလပ်အင်များWidgets တွေWordPresswordpress စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းwordpress backup ပလပ်အင်wordpress CDDwordpress cdn plugin ကိုwordpress အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပလပ်ဂင်wordpress ပုံစံများ plugin ကိုwordpress plugin များကိုwordpress podcast ကို plugin ကိုwordpress smtp plugin ကိုwordpress လူမှုရေးဝေစု plugin ကိုwp ဒုံးပျံ
Cheetah Digital: ယုံကြည်စိတ်ချရသောစီးပွားရေးတွင်သုံးစွဲသူများကိုမည်သို့ဆက်ဆံရမည်နည်း
WordPress တွင် Google Workspace နှင့် Two-Factor Authentication ဖြင့်အီးမေးလ်ပို့ပါ
5:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 21
ဂရိတ်စာရင်းနှင့် infographic ။ ထုံးစံအတိုင်းအဟောင်း၊ အကျွမ်းတ ၀ င်အကြိုက်ဆုံးများနှင့်အချို့သောအသစ်သောအသစ်များကိုငါထွက်ရတော့မည်! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
6:2015 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 53
ဒီစာမျက်နှာကိုဖတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ ငါဖတ်ဖို့တစ်ခုခုအတွက်တစ်ဝက်ကိုလှိမ့်ခဲ့ရတယ်၊ အဲဒါမတန်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည် 3/4 စာမျက်နှာမျက်နှာပြင်တောက်ပသောခလုတ်များနှင့်ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် pop up တစ်ခုဟုထင်လျှင်စီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင်ဆုံးရှုံးသွားသည်။ မင်းကိုငါနဲ့အတူအတူတူမင်းကိုတစ်ခုခုအကြောင်းဝေမျှဖို့ဒီစာကိုရေးတာငါအရမ်းစိတ်ရှုပ်ခဲ့တယ်။ ထိုပြေးလမ်းမှဖြတ်သည်။ ငါဟောင်းကျောင်းဟောင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နည်းပညာအရှိန်အဟုန်မှာရွေ့လျားနေသည်။ သို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သေချာနေသလား။ သင်၏စာဖတ်ပရိသတ်အများစုသည်အရောင်ကန်းနေပါကကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါဆက်ဆက်ထိုလမ်းကိုသွားပါတယ်။
တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စတိဗ်။ ဤအကြောင်းအရာကိုသင့်အားအခမဲ့ ပေး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဂဏန်းနှစ်လုံးအထိတိုးလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်များ၊ ကြော်ငြာရှင်များနှင့်စပွန်ဆာများ၏လမ်းညွှန်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ပိုမိုလိုလားသည်။ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါဒေါက်ဂလပ်! သင်ဒီမှာရှိစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘလော့ဂ်။ ကြီးစွာသောအကူအညီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်